अपारदर्शी लगानी नल्याउनुस् :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली | Citizen FM 97.5 Mhz
अपारदर्शी लगानी नल्याउनुस् :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपारदर्शी ढंगले लगानी नल्याउन उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा आयोजित कार्यक्रममा उनले अपारदर्शी ढंगले लगानी नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
‘लगानी गर्नुस् र देखाएर लगानी पनि ल्याउनुस् । अपारदर्शी ढङ्गले होइन पारदर्शी ढङ्गले १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत जाला । यो देशबाट ल्याएँ, यति ल्याएँ, यति मैले पाएँ भन्नुस्’ उनले भने, ‘अदृश्य ढङ्गले गर्दा लुकाउन पनि गाह्रो, देखाउन पनि गाह्रो । देखिएला भन्ने डर । त्यो किन गर्नुहुन्छ ?’
उनले विदेशी लगानी ल्याउनेले आफूले ल्याएको रकम कालो धन नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘कसैले बाहिरबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्छ भने अवश्य नै उसले यो पैसा स्वच्छ हो है भनेर आफ्नो प्रतिवद्वता जाहेर गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सरकारले लगानी सुरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै उनले आफूसँग भएको रकम निकाल्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंहरु आफूसँग भएको रकमहरु निकाल्नुस् । मैले अलि पहिले पनि भनेको थिएँ, डर्टी मनी होइन । तर, मान्छेले निकाल्न सकिराख्या छैनन्’ उनले भने ‘लगानी गर्नुस् । आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्ने हो ।’
व्यवसायीलाई नयाँ सम्भावना खोज्न आग्रह गर्दै उनले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिने बताए । ‘आफ्ना मौलिक उद्योगहरु खोलौं । कुन ठाउँमा के सुविधा चाहिन्छ ? न्यायोचित, यथोचित सुविधा, उद्योगका निम्ति आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा मेसिनरी चिजको वा प्रविधिको गर्नुपर्दा के सहयोग दिनुपर्यो ? त्यो सरकारको विषय हो ।’ उनले भने ।
युटुबमा करोड हेरिएका कलाकार जसलाई दर्शक श्रोतलेनै चिन्दैनन् !पैसा कमाउनको लागि फोहोरी खेल -कमल सरगम